ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သူ နှင့် ပေးသွင်းသူများ - တရုတ် စက်ရုံ - ရှန်ကျန်း Xiangfu တိကျစွာ စက်မှုလုပ်ငန်း Co. , Ltd
နေအိမ် > ထုတ်ကုန်များ > CNC တိကျစွာ စက်ယန္တရား > တိကျစွာ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ အစိတ်အပိုင်းများ > ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ
The အောက်ပါ ဟုတ်တယ် အကြောင်း ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ ဆက်စပ်, ငါ မျှော်လင့်ပါတယ် ရန် ကူညီပါ မင်း ပိုကောင်း နားလည်သည် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ.
1.Mould ပစ္စည်း: သတ္တု / စက္ကန့ / al6061 ECT
2.Sureface ကုသမှု: ဖောက်သည်တောင်းဆိုမှုကိုအဖြစ်
3.3D ပုံဆွဲ: STEP သို့မဟုတ် IGS ပုံစံ
4.Keyword: cnc စက် / cnc အစိတ်အပိုင်းများ
5. ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်းကြာချိန်: 15-60days
၁။ သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု။ သင်လိုအပ်လျှင်ဖိုင်များကိုလုပ်ပါသို့မဟုတ်ဒီဇိုင်းကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ပါ။
၂။ ဈေးနှုန်းတင်ခြင်း - ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရမှိုများကို ၁ ရက်အတွင်းအပြီးသတ်လိမ့်မည်။
၃။ ညှိနှိုင်းခြင်း - အရည်အသွေး၊ စျေးနှုန်း၊ ပစ္စည်း၊ အချိန်ကိုပေးရမည့်ပစ္စည်း၊
4. မှိုဒီဇိုင်း: မှိုနှင့်ထုတ်ကုန်များအတွက် 3-5days 3D / 2D ပုံဆွဲဒီဇိုင်း။
5. မှို: မှိုလုပ်မတိုင်မီမှိုတည်ဆောက်ရန်ဖောက်သည် '' တောင်းဆိုချက်အရသိရသည်။ ကျနော်တို့ပထမ ဦး ဆုံးဖောက်သည်၏ခွင့်ပြုချက်မှမှိုဒီဇိုင်းကိုပို့။ မှိုများသောအားဖြင့်ရက်ပေါင်း 40-50 အတွင်းပြီးဆုံးလိမ့်မည်။
၆ ။ ပြီးတော့စားသုံးသူတွေရဲ့ရည်ညွှန်းချက်အတွက်နမူနာတွေပို့ပေးပါလိမ့်မယ်။
7. နမူနာ။ ပထမဆုံးနမူနာထွက်လာလျှင်ဖောက်သည်ကိုကျေနပ်မှုမရှိပါ။ ကျနော်တို့မှိုပြုပြင်မွမ်းမံခြင်းနှင့်ဖောက်သည်များ၏စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ့ဆုံရန်သည်အထိ။
၈။ ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း - ကုန်ပစ္စည်းများကိုပင်လယ်ပြင်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လေကြောင်းဖြင့်ဖြစ်စေပို့ဆောင်ခြင်း။
1. မှိုပစ္စည်းမေး / C ကို
က) မှိုသံမဏိစစ်ဆေးခြင်း (မာကျောမှု၊ အားနည်းချက်ကိုစစ်ဆေးခြင်း)
ခ) မှိုအပိုပစ္စည်းများစစ်ဆေးခြင်း (ခိုင်မာသော, အရွယ်အစား)
2. မှိုအောင်ဖြစ်စဉ်ကိုမေး / C
က) ဒီဇိုင်းစစ်ဆေးခြင်း (တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီဇိုင်း၊ မှိုဒီဇိုင်း၊ မှိုအင်ဂျင်နီယာပုံဆွဲခြင်း)
ခ) မှိုအရွယ်အစားစစ်ဆေးခြင်း (ပုံဆွဲအရ)
ဂ) မှိုစမ်းသပ်ခြင်း (မှို၊ အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ နမူနာစစ်ဆေးခြင်း)
A: အရည်အသွေးစစ်ဆေးမှုနှင့်စျေးကွက်စစ်ဆေးခြင်းအတွက်နမူနာမှာယူနိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကုန်တင်ခငွေပေးချေမှုဖြစ်လိမ့်မည်။ ရိုးရှင်းသောနမူနာရှိပါကကျွန်ုပ်တို့သည်ကုန်ကျမှုကိုအားမပေးပါ။ OEM / ODM နမူနာဖြစ်ပါကနမူနာကုန်ကျစရိတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့တောင်းခံပါလိမ့်မည်။
မေး။ MOQ ဆိုတာဘာလဲ။
A: MOQ တွင်စာရင်းရှိပါက ၁၀၀၀၀ ပီစီဖြစ်သည်။
A: ငွေစက္ကူအစိတ်အပိုင်းများကိုငွေပေးချေပြီးနောက် ၃ ရက်မှ ၇ ရက်အတွင်းပြုလုပ်ရမည်။ OEM ဖြစ်လျှင်သို့မဟုတ်မှိုလုပ်, ငါတို့သည်သင်တို့နှင့်အတူပေးပို့အချိန်အတည်ပြုပါလိမ့်မယ်။
A: သတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေများနှင့်အညီငွေပေးချေမှုဆိုင်ရာသတ်မှတ်ချက်များသည်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 30% TT သိုက်အားအကြံပေးပါသည်။ ပစ္စည်းတင်ပို့ခြင်းမပြုမီလက်ကျန်ငွေကိုပေးချေပါမည်
hot Tags:: ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပစ္စည်းကိရိယာ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ, တရုတ် ပေးသွင်းသူများ, စက်ရုံ, ထုတ်လုပ်သူများ လုပ်သည် in တရုတ် စိတ်ကြိုက်, စျေးပေါသော စျေးနှုန်း, ဈေးနှုန်း ဝယ်ပါ အမြင့် အရည်အသွေး, အကြမ်းခံ, အနိမ့် စျေးနှုန်း, In ကုန်ပစ္စည်း အခမဲ့ နမူနာ
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ဝှီးချဲ ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ